बुधबार जन्मनेहरु कति भाग्यमानी ? यस्तो रहन्छ बुधबार जन्मनेहरुको स्वभाव र भविष्य ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/बुधबार जन्मनेहरु कति भाग्यमानी ? यस्तो रहन्छ बुधबार जन्मनेहरुको स्वभाव र भविष्य !
मलेसियाबाट आयो यस्तो दुखद खवर !